Mon GTI / GTC / GTU: 2009
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 04:283comments:
Phone ကို ရီမုတ် ကွန်ထရိုး အဖြစ် သုံးနိုင်မည်
အိုင်ဖုန်းဖြင့် မိမိ၏ ကားအား အဝေးထိမ်း ရီမုတ်ကွန်းထရိုး အဖြစ် အသုံးချနိုင် © ( www.wired.com )
မော်တော်ကား တံခါးများကို ဖွင့်ရာတွင် အဝေးမှ ရီမုတ် ကွန်ထရိုးဖြင့် လှမ်းဖွင့် ခြင်းသည် ခေတ်စားသော အလေ့အထ တခုအဖြစ် ရပ်တည် လာသည်မှာ ကာလ အတန်ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ iPhone အသုံးပြုသူ များသည် ၎င်းတို့၏ ဖုန်းကို မော်တော်ကား ရီမုတ်အဖြစ် အသုံးပြု နိုင်တော့မည်ဟု သိရှိရသည်။ iTunes မှတဆင့် Download လုပ်ယူနိုင်သော ယင်း Application သည် iPhone ၏ ဘက်စုံ အသုံးတည့်မှုကို ပိုမိုပြည့်စုံ ကောင်းမွန် လာစေမည် ဖြစ်သည်။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 20:47 No comments:
မွန်ဂျီတီအိုင် ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားဟောင်းများ၏ ဒီဇင်ဘာလပတ် အစည်းအဝေးကို CHOA CHU KANG ရှိ မဇာဇာထွန်းရဲ့ နေအိမ်မှာ (၁၂.၁၂.၂၀၀၉)က ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အစည်းအဝေးသို့ကိုသောင်းဆွေဝင်း(95-MP)၊ စောအောင်ထွန်းဦး(97-MT)၊ ကိုနိုင်ဝင်း(99-EC)၊ ကိုအောင်ခိုင်လင်း(98-MP)၊ မအေးနန္ဒာဝင်းမောင်(97-CIVIL)၊ မဝေဝေနွယ်(97-MT)၊ မကြေးမုံဝင်း(99-EP)၊ မဇာဇာထွန်း(2000-CIVIL)၊ တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 07:32 No comments:
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 07:10 No comments:
Email account များပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်
ကျွန်တော်တို့ website ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သော mongti.com ဒိုမိန်းနှင့် account များကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ email ဟာ google application သုံးထားသည့်အတွက် data ပျက်ဆီးသွားခြင်းမဟုတ်ပဲ Email log in link ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ထို link များကို ပြန်လည်ရရှိပြီးပြီဖြစ်သည့်အတွက် မူလအတိုင်းပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Account ရရှိပြီးသူများသည် ယခင်အတိုင်းမိမိတို့ ၏ user name and password များကို အသုံးပြုပြီး ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီးဖြစ်သလို အသစ်လိုချင်သူများလည်း admin.mongti@gmail.comသို့ပြန်လည်တောင်းယူနိုင်ပါပြီ။
Email Log in နေရာသည် main website ရဲ့ pages categories အောက်မှာရှိပြီး ထို Email log in page ထဲမှမေဂျာအလိုက် log in link များသုံး၍ Log in ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
( Email Log in)
Email format: yourname@yourmajor.mongti.com
အခက်အခဲများ အဆင်မပြေမှုများများစွာရှိသည့်အတွက် အားလုံးကို အနူးအညွတ်တောင်းပန်ရင်း ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ မိခင်ကျောင်းတော်ကြီးကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်း email များကို အသုံးပြုကြပါစို့ ဟု တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 21:29 No comments:
(ဆရာတော်အရှင်ဇဝနဟောကြားတော်မူသော မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ကတယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်အား ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
တရားတော်များ website link ကို Mon GTI/GTC/GTU ဆုံဆည်းရာတွင် share လုပ်ပေးသော Ma Khine Lay(Civil) နှင့် မူရင်း upload ပြုလုပ်သူ U San Aung အား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။)
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 20:05 No comments:
ဆောင်းဦးနံနက်ခင်း နှင့် ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးချင်သော သစ်တစ်ပင်အကြောင်း
ငါတို့ တောက်ပတော့မယ့် မနက်ဖြန်တွေအတွက်
အိမ်မက်တွေ အစီအရီ စိုက်ပျိုးခွင့်
ငါတို့ရခဲ့ရင်…. ပေါ့။
မင်းငိုကြွေးခဲ့တဲ့ နေ့ ရက်တွေ
စွန့် ပစ်ထား လိုက်တော့။
သမိုင်းအသစ်ကို ငါတို့တူးဖော်ကြမယ်။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 04:05 1 comment:
(ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထုတ် Weekly Eleven ဂျာနုယ်မှာပါတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုးစားချင်စိတ်အပြည့်ရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ညီငယ်ညီမငယ်များအတွက် အားတက်စေမယ့် သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး မူရင်းပို့ စ်ကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။)
စင်္ကာပူသမ္မတနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု အစိုးရတက္ကသိုလ်ကြီးသုံးခုဖြစ်သော NTU(Nayang Technological University) ၊ NUS(National University of Singapore) နှင့် SMU(Singapore Management University) တို့ မှ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ပညာသင်နှစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ကောလိပ်၊သိပ္ပံများနှင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များမှ ပညာသင်ကြားနေဆဲဖြစ်သောကျောင်းသူကျောင်းသားအား အချိန်ပြည့်ဘွဲ့ သင်တန်း(Full Time Under-graduate Degree Course)အတွက် ပညာသင်ဆုများပေးအပ်ရန်ကမ်းလှမ်းလာကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပညာသင်ဆုများလျှောက်ထားရာတွင် ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ပညာသင်နှစ်၊အစိုးရနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ကောလိပ်၊သိပ္ပံများမှ A.G.T.I ပထမနှစ်စာမေးပွဲတွင် ဘာသာရပ်အလိုက် တစ်နိုင်ငံလုံး အဆင့်(၁)မှ(၁၀)အတွင်း ရရှိခဲ့သူများ လျှေက်ထားရမည်ဟုသိရှိရပြီး ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားခွင့်ရရှိသူ ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် ရေးဖြေနှင့်နှုတ်ဖြေအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲများကို ဖြေဆိုကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ပညာသင်ဆုပေးအပ်ရန်ကမ်းလှမ်းလာသောဘာသာရပ်များမှာနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ကောလိပ်၊သိပ္ပံများမှမြို့ ပြဘာသာရပ်၊စက်မှုစွမ်းအားဘာသာရပ်၊CNCဘာသာရပ်၊လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်ဘာသာရပ်၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဘာသာရပ်၊ စက်မှုအီလက်ထရွန်းနစ်ဘာသာရပ်၊ သုတနည်းပညာဘာသာရပ်နှင့် ကွန်ပျူတာကက္ကသိုလ်မှကွန်ပျူတာဘာသာရပ်တို့ ဖြစ်သည်။
ပညာသင်ဆုရရှိသည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအနေဖြင့် ပညာသင်ကြားနေစဉ်အတွင်း ကျောင်းလခ၊စားစရိတ်၊သက်ဆိုင်ရာကျောင်းရှိအဆောင်များတွင်နေထိုင်ခွင့်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ရမည့်အသွားအပြန်လေယာဉ်စားရိတ်နှင့် တစ်နှစ်လျှင်စင်္ကာပူဒေါ်လာ(၄၃၀၀)ကို ခံစားခွင့် ရမည်ဖြစ်သည်။
ပညာသင်ဆုအတွက်အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲကိုလာမည့်ဒီဇင်ဘာ(၅)ရက်နေ့ တွင်ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ကောလိပ်၊သိပ္ပံများနှင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင်ဖြေဆိုကြရပြီးမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းရှိကျောင်းသားကျောင်းသားများမှာMandalayနည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင်ဖြေဆိုကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
(Ref: Weekly Eleven Journal)
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 21:56 No comments:
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 06:16 No comments:
ကျွန်တော့်အလုပ်ခွင်ထဲမှ မှတ်စုများ (၁)
(ဒီပို့စ်က (Electronics, Electrical, Mechatronics) နည်းပညာဘာသာရပ်ကို လေ့လာနေဆဲဖြစ်တဲ့ ညီငယ်ညီမများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ကျွန်တော့်အလုပ်ခွင်ထဲမှ ကျွန်တော်သိသမျှကို အတတ်နိုင်ဆုံးရေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဤပို့စ်သည် အတွေ့ အကြုံရှိပြီးသားသူများအတွက် လွယ်ကူမည်ဖြစ်သော်လည်း အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော ကျောင်းပြီးကာစသူများအတွက်၊ ဤ လောကထဲသို့ စတင်ဝင်ရောက်လာသောသူများအတွက် အဖိုးတန်လိမ့်မည်လို့ယူဆပါသည်။ Theory နဲ့ Practical ဘယ်လိုဆက်စပ်ပြီးနားလည်ရမလဲဆိုသော၊ လုံးဝမသိသေးသဖြင့် လေ့လာသိချင်သောသူများအတွက် အဖိုးတန်ပါလိမ့်မည်ဟုယူဆပါသည်။)
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 10:29 1 comment:
မရှိခြင်းကို သုညလို့ ပြောရင် အဲဒီကောင်ဟာ ငါဖြစ်လိမ့်မယ်။ အိပ်မက်တွေအစီအရီသီဖို့ ကြိုးစားခဲ့ဖူးတဲ့ ကောင်ပေါ့။ မရခဲ့ပါဘူးလေ။
မရှိခြင်းတွေအပြည့်ထည့်သိပ်ထားတဲ့တောင်းတစ်လုံးကလွဲရင်ပေါ့။ အခုချိန်ထိ တိုးထွက်မလာနိုင်သေးတဲ့ နေရောင်ကို လှမ်းမျှော်လို့ ငါ စောင့်ကြည့်နေခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီလောက်အထိ ညံ့ဖျင်းတဲ့ကောင် ငါပါ။
တစ်ခါတစ်လေ ခေါင်းစဉ်အကြောင်းတွေးမိရင် ဦးနှောက်ခြောက်တယ်။ ဘဝကို ခပ်ပါးပါးလေးခပ်ကြည့်မိတော့ အရှုံးတွေအပြည့်နဲ့အောင်လံထူနေတဲ့ ငါ့ကိုငါပြန်တွေ့ နေရတယ်။ ငါပြေးနေရင်းနဲ့ခြေချော်လဲကျ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင်တွေတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးတက်နေတယ်လို့ထင်နေရင်းနဲ့အစကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူး။အခုတော့ငါ့မှာကုန်းကောက်စရာပီမိုးနင်းစာအုပ်တွေမရှိဘူး။ မိုင်ထောင်ချီခြေလျင်ခရီးနှင်ပြီး ကျောင်းတက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့သူရဲ့ ဇာတ်လမ်းငါပြန်ဖတ်ဖို့ မရှိဘူး။ ဆရာဖေမြင့်ရဲ့ဘေဘီလုံမှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်စာအုပ် ငါ့မှာမရှိဘူး။ လဲကျတိုင်းမှာ ပြန်ထူမတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အားအင်အဟောင်းတွေငါ့မှာမရှိတော့ဘူး။
အဲဒီဆောင်းညမှာမွေးဖွားပြီး ဆောင်းတွင်းမှာ နာကျင်အေးခဲနေတဲ့ဝေဒနာကုဖို့ဆေးတစ်ပင် ငါ့ကိုပေးပါ။ တစ်ဖြေးဖြေးနဲ့ပျင်းရိလာတဲ့စိတ်ကို ငါပြန်လည်မွေးဖွားချင်တယ်။
ဒီရာစုသစ်ထဲမှာ လေးဖြူသီချင်း ငါမဆိုနိုင်တော့ပါ။ ပွင့်ကွဲပေါက်ထွက်ဖို့စိတ်အနုမြူဗုံး ငါတစ်လုံးပြီးတစ်လုံး တပ်ဆင်ချင်ခဲ့တယ်။ ငါ့ကို အကြမ်းဖက်သမားလို့ ပဲပြောပြော ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါ့ကိုငါ ပြန်အကြမ်းဖက်ချင်ခဲ့တဲ့ကောင်ပါ။ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်ခုံရုံးမှာ ငါ့ကိုယ်ငါ သေဒဏ်တောင်းဆိုချင်ခဲ့တဲ့ကောင်ပါ။
ငါ့စိတ်လေနှင်ရာလွင့်ဖို့ တောင်အခွင့်အရေးမရှိတဲ့ ဒီလောကမှာ ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်း ရွက်နုတွေ ငါ့သစ်ပင်မှာ ဝေပါရစေ။ အသစ်တစ်ဖန်ပြန်မွေးဖွားတဲ့ကောင် ငါဖြစ်ချင်တယ်။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 09:47 No comments:
(စာမရေးတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ကိုသောင်းဆွေဝင်းရဲ့ email မှ စာကို ပြန်လည် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းလည်း အခုထိ မတင်နိုင်သေးတဲ့ အချိန်မှာ တစ်စုံတစ်ရာ အကျိုး သက်ရောက်စေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။)
ခင်မင်လေးစားရပါသော ဆရာ/ဆရာမ များနှင့် သူငယ်ချင်းများ
ပြီးခဲ့တဲ့ November လအတွက် Balance Sheet ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွင့်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ အမှားအယွင်း ရှိပါက ပြန်လည်ပြောကြားပေးစေ ချင်ပါတယ်။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 07:15 No comments:
မော်လမြိုင် စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ/အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်ကျောင်း၏ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲနှင့်မိတ်ဆုံစားပွဲကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ၊၂၆ ရက်၊ စနေနေ့ တွင် မော်လမြိုင်မြို့ဖားအောက်ကျေးရွာ ရိုးဂိုးဘုရားဓမ္မာရုံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
အဆိုပါ အာစရိယပူဇော်ပွဲအတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပါဝင်လှုဒါန်းလိုသူများ ဖိတ်စာပါလိပ်စာများသို့ လည်းကောင်း၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ ပါဝင်လှုဒါန်းလိုသူများ ကိုဝင်းကျော်မိုး(93 EP)၏ ပင်နီဇွဲလားပလာဇာ လေးလွှာရှိ ရွှေမင်းသမီးစတိုးတွင်လည်းကောင်း ပါဝင်လှုဒါန်းနိုင်ကြပါသည်။ ထို့ ပြင် ရွှေမင်းသမီးစတိုးတွင် တတိယအကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲမှတ်တမ်းVCD ကို အခမဲ့တောင်းယူနိုင်ပါသည်။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 02:54 No comments:
သူ့မှာ....... လှပတဲ့ နေ၀င်ချိန်ရှိတယ်
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 06:43 1 comment:
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 03:13 1 comment:
(Mon GTI/GTC/GTU website ကဏ္ဍာအသစ်တစ်ခုရဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာလက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ကိုကျော်လွင်ဝင်းနဲ့အင်တာဗျူးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာ တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ပြီး ကင်မရာမင်းတာဝန်လည်း ယူထားသူဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုဓါတ်ပုံပြန်မရိုက်တတ်ဘူးဆိုလို့ ကျွန်တော့်ဆီမှာရှိတဲ့ရှားပါးပုံလေးပဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်ဖက်ဒေါင့်ဆုံးကဦးထုပ်အနီလေး ဆောင်းထားသူဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။)
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ။ အစ်ကို့ နာမည်၊မေဂျာ၊ကျောင်း၊ ကျောင်းဆင်းခဲ့တဲ့ခုနှစ်နဲ့မိတ်ဆက်ပြီး စလိုက်ကြရအောင်။
မင်္ဂလာပါ။ ကျော်လွင်ဝင်း၊ MP,96 MON GTI က ပြီးတာပါ။
93 ခုနှစ်မှာ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး GTI ဝင်ခွင့် ဖြေတယ် MP မေဂျာဦးစားပေးလျှောက်ထားတော့ MON GTI ကို မလျှောက်ထားပဲ ရောက်လာတာပါ။ ရောက်စတော့ ပြန်ပြေးချင်တယ် (အိမ်ကို)။ မိုးအရမ်းကြီးတော့ အိမ်ကို အရမ်းလွမ်းလို့။
ဖားအောက်ရွာထဲက (ခရေပင်ကြီးအိမ်) ဒေါ်ငယ်တို့ အိမ်မှာ ခဏနေပြီး ကျောင်းထဲက ဒက္ခိဏ တိုးချဲ့ (ဘုရားခန်း) မှာ အဆောင်ရတာ။ အဆောင်ထမင်း နဲ့ ဟင်းက လွဲရင် အဆင်ပြေတယ်။ အဆောင်မှူးက ဦးမိုးဇော်ထွန်းပေါ့။ အခန်းလာတိုင်း ဖဲဝိုင်း ဖမ်းမိလွန်းလို့ နောက်တော့ သတိပေးရုံမဟုတ်တော့ပဲ လောင်းကြေး ကို အဆောင်ရံပုံငွေ အဖြစ် သိမ်းတော့တာပဲ။ ဒါနဲ့ပဲ ကစားတဲ့ သူတွေက ငွေအစားထိုးပြီး ကူပွန်သုံးပြီး ဆော့တော့တာပဲ။ ဖမ်းမိရင် တစ်ဝိုင်း လုံးမှ ငွေ တစ်ဆယ်ကျပ် လောက်ပဲ့ မိတော့တယ်ပေါ့။ ဆရာလည်း တော်တော် စိတ်လေသွားတယ်။
ရှားရှားပါးပါး တစ်ခါ အဆောင်ရှေ့ ဂစ်တာတီးတာ လိုက်ဖူးတယ်။ ဒေါ်ခင်စန်းသွင်နဲ့ ပြဿနာ တက်ပြီး၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် (ယာယီ)ကျောင်းထုတ် ခံရတယ်။ အချိန်က မနက် ၁ နာရီတီးရှိမယ်ထင်တယ်။ အရှေ့မှာတစ်ဖွဲ့ တီးပြီး နောက်တစ်ဖွဲ့ တီးပြီးပြန်ခါနီးမှ ရောက်လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စတီးတဲ့အချိန်မှာ ကောင်းကောင်းအဆူခံရတယ်။ ဒါက ကျောင်းတုံးက မမေ့နိုင်စရာ အဖြစ်အပျက်လေးတွေပေါ့ဗျာ။
ဒါနဲ့ ကျောင်းစာဖတ်ရင်း ပျော်ရင်းပါးရင်နဲ့ ၁၉၉၆ မှာ ဂျီတီအိုင်ပြီးခဲ့ပါတယ်။
ပြီးတော့ YIT Entrance ဖြေတယ်။ ဝင်ခွင့်ရတော့ ဆရာဖြစ်သင်တန်း၊ အင်းစိန် GTI မှာတက်ရတယ်။ ၉၆ ကဆို ကျွန်တော်ရယ်၊ EP က ဝင်းထွဋ္ဋ်လှ ရယ်၊ နှစ်ယောက်တည်း။ မနက် PT လုပ်ပြီး ဘောလုံးကွင်းပတ်ပြေးရတယ်။ အင်းစိန်ကျောင်းထဲမှာပဲနေပြီး SAT and SUN မှာ အိမ်ပြန်ခွင့်ရတယ်။ ဝင်းထွဋ္ဋ်လှကတော့ နှစ်ရက် တက်ပြီးထွက်သွားတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ငါးရက်တက်ပြီးထွက်လိုက်တယ်။ ဆရာမလုပ်ချင်လို့လေ။ (အဲဒီဆရာဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ လူတွေလည်း တကယ်တော့ ဆရာ မလုပ်လည်းရတယ်ဗျ၊ ဒီမှာ ရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်)
ကျောင်းပြီးတော့ S.A.E ပေါ့။ အလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ အိမ်မှာ SLEEP, And EAT. J
အိမ်နားက ကိုတင်ထွန်းဝင်း အဲယားကွန်းနဲ့ ရေခဲသေတ္တာမှာ ကူလုပ်ပြီး ၉၈ ခုနှစ်မှာ ကျောင်းက နှစ်တူပြီးတဲ့ သူငယ်ချင်း ကိုမြတ်မင်း၊ ကိုလွင်မျိုးမင်း တို့နဲ့ တွဲပြီး အဲယားကွန်းဆိုင်ဖွင့်ဖြစ်တယ်။ KLM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပါ။
သီးသန့်စီစဉ်တာတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီတုန်းက ကိုးရီးယား ကို Try လိုက်၊ စင်ကာပူကို Try လိုက်နဲ့၊ Premier Oil Company ကို Try လိုက်နဲ့။ B.Tech ကျောင်းခေါ်စာရင်းဒုတိယအသုတ်မှာ နာမည်ပါလာတော့ B.Tech ကို ဆက်တက်ဖြစ်တယ်။ B.Tech ပြီးတော့ မြေနီကုန်း ကဆိုင်မှာ လုပ်ရင်း စင်ကာပူထွက်ဖို့အတွက် T.N.Y Agent မှာ လျှောက်လွာတင်တယ်၊ စာတွေ့ လက်တွေ့ လူတွေ့ စစ်အောင်ပြီး စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ PSA မှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ ၂၀၀၄ စက်တင်ဘာမှာ စင်ကာပူကို ရောက်တယ်ဗျာ။
အခုလက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဘဝ အကြောင်းလေးလည်း သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
PSA မှာ ၃ နှစ်လုပ်ပြီး INDECO ကို အလုပ်ပြောင်းဖြစ်တယ်။ အဲဒီ INDECO ENGINEERS. PTL မှာ နှစ်နှစ်နီးပါးမှာ ကြာတော့ လက်ရှိ POWER FORCE TECHNOLOGIES PTL မှာ လုပ်နေပါတယ်။
အစ်ကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာတွေများဆက်လက်လေ့လာဖြစ်သလဲ။ ဆိုလိုတာက ကျောင်းက သင်ပေးလိုက်တာအပြင် ဘယ်လိုများကိုယ့်ကိုကိုယ် လေ့လာဖြည့်ဆည်းခဲ့ပါသလဲ။
လက်ရှိထိတော့ ဒီမှာကျောင်းလည်း ဆက်မတက်ဖြစ်သေးဘူး။ လုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်ချက်အရ Hydraulic တို့၊ Electrical တို့တော့ လေ့လာဖြစ်ပါတယ်။ AutoCAD ဆွဲတာလည်း အချိန်ရရင် လေ့ကျင့်ပါတယ်။ Self-Study ဆိုတော့ နဲနဲနှေးသလိုရှိတယ်။
လူငယ်တွေအတွက် အခွင့်အလမ်း၊လမ်းကြောင်းတွေ ရှာဖွေဖို့ အခက်အခဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ များ အကြံပေးနိုင်ရင် ဘယ်လိုလမ်းကြောင်း၊ဘယ်လို professional မျိုးရွေးသင့်တယ်။ ဘယ်လိုအသုံးဝင်နိုင်တယ် စသည်ဖြင့် အစ်ကို့ အတွေ့ အကြုံနဲ့ ယှဉ်ပြီး အကြံပေးနိုင်မလား။
မိမိဝါသနာပါတဲ့ Subject ကို Specialized ကျွမ်းကျင်ပြီး Independent လုပ်နိုင်အောင် လေ့လာစေချင်ပါတယ်။ Experience အတွေ့အကြုံ ရှိအောင်လည်း လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ English ဖြစ်နိုင်ရင် Chinese ပါ ဖြည့်စွက်လေ့လာစေချင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဂျူနီယာ ညီ၊ညီမလေးတွေကို စကားလက်ဆောင်လေးပေးချင်တာများရှိရင် ကျေးဇူးပြု၍…….
ဒီကို လာမယ်ဆိုရင် (ကျောင်းဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်) သေသေချာချာ လေ့လာစုံစမ်းပြီး (ဆန္ဒမစောပဲ) လုပ်ကြဖို့ပါ။
အခုလို ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 05:422comments:
မကြာခင်ရောက်တော့မယ့် ဒီဇင်ဘာနှင့် ခရစ်စမတ်အတွက် သီချင်းသစ်နှစ်ခွေ ထွက်ရှိလာပါတယ်။
ပထမအခွေက ခေါင်းစဉ်ကို ခရစ်စမတ်လို့ အမည်ပေးထားပြီး Lလွန်းဝါ၊ ဖြူဖြူကျော်သိန်း၊ ဒီလေး၊ မျိုးကြီး၊ Lဆိုင်းဇီ၊ ချောစုခင်တို့သီဆိုထားပါတယ်။ အိမ်မပြန်အား၊ မနေ့ကလိုပဲ၊ မေရှိယ၊ မွေးနေ့ခရစ်စမတ်၊ မွေးဖွားခြင်းအကြောင်း၊ ဖွားမြင်သည်၊ ဆောင်းရင်ခွင်၊ သခင့်ရဲ့သိုး၊ သင့်အတွက်၊ သွေးပျက်သူ စသည့်သီချင်း ၁၀ ပုဒ်ပါဝင်ပါတယ်။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 00:41 No comments:
" ရင်ဘတ်ထဲက ဘ၀ဆိုတဲ့ကျောင်း "
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 05:365comments:
ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့သော နေ့ ရက်များ(၁)
(ဒီဆိုဒ်အတွက်ဘာရေးရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတုန်းရေးခဲ့ဖူးတဲ့ကျောင်းသားဘဝအပိုင်းအစလေးတွေကိုပြန်လည်သတိရမိပါတယ်။ ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့သောနေ့ရက်များလို့နာမည်ပေးထားပြီး ဒါတွေကို အဆင်ပြေသလိုတင်ပေးသွားမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ ပျင်းရိငြီးငွေ့စရာကောင်းနေရင်တော့ကျွန်တော့်ရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုသာဖြစ်ပြီး စိတ်ရှည်သည်းခံပေးပါလို့ ကြိုတင်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။)
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက်က ရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ကျောင်းသားဘဝ အရသာကို အခုပြန်လည် တမ်းတပြီး မှတ်မိသမျှ ဖော်ထုတ် ရေးသားချင်စိတ်က လက်ရှိ ဒီနိုင်ငံမှာ ကျွန်တော် စာသင်ခန်းဆီကို ခြေဦး ပြန်လှည့်ချိန်မှာ ပိုပြီးပီပြင် ပေါ်လွင် လာပါသည်။ အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားကြောင့်လား ပတ်ဝန်းကျင် ကြောင့် လားတော့ မသေချာပါ။ သေချာတာက ကျောင်းတက်တဲ့ ပထမဆုံးနေ့မှာဖြစ်တဲ့ စိတ်ခံစားမှု ကတော့ တော်တော်ကွာ ခြားပါတယ်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်ခန့်က ဆယ်တန်းအမှတ်စာရင်း ထွက်ပြီးချိန်ကို ကျွန်တော်ပြန်လည် သတိရနေမိ ပါတယ်။ အမှတ်စာရင်းစာရွက်လေးကိုင်ပြီးတော့ ဘာလုပ်ရရင် ကောင်းမလဲလို့ဖြစ်နေတာ။ တက္ကသိုလ်တွေကလည်း ပိတ်ထား၊ အမှတ်ကလည်း ဟိုမရောက်ဒီမရောက်နဲ့ဘယ်လိုင်းရွေးလို့ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ယောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ကလေးဘဝ တုန်းကတော့ ရန်ကုန် YIT ကျောင်းတော်က ကျွန်တော့ကို တော်တော် ဆွဲဆောင် ခဲ့တယ်။ မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)၊ နွမ်းဂျာသိုင်း၊ မင်းလူ အစရှိတဲ့ စာရေးဆရာတွေ ရေးတဲ့ တက္ကသိုလ်နောက်ခံ ဝတ္ထု တွေမှာ YIT ဇတ်လမ်းတွေ ပါလာရင် အရူးအမူးပဲ။ ဩဘာလမ်းတို့ဘာတို့ လည်း စာထဲကနေ ရင်းနှီးလို့ ။
မှတ်မှတ်ရရ ကျောင်းဟောခန်းထဲမှာ လုပ်တဲ့ စာပေဟောပြောပွဲလည်း တစ်ခါတက်လိုက်ဖူးတယ်။ အဲဒီတုန်းက အော်ပီကြယ်၊ ဂျူး၊ ဆရာခင်မောင်သန်း နဲ့အခြားနာမည်ကြီး စာရေးဆရာတို့ဟောခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အမှတ်စာရင်းလေး ကိုင်ပြီး ကျောင်းကို တစ်ခေါက်လောက် သွားလည်တော့ ပိတ်ထားတဲ့ ကျောင်းတံခါးနဲ့ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ စာသင်ဆောင်တွေပဲ တွေ့ ခဲ့ ရတယ်။ စိတ်တော့ နည်းနည်း သက်သာ သွားမိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ ကိုယ့်အမှတ်က မမှီ၊ ကျောင်းဖွင့်တယ် ဆိုရင်တောင် ဝင်ခွင့်ရဖို့မရှိဘူးလေ။ (ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အသုတ်က ပုံမှန် YIT တက်ကြတဲ့ သူတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။)
အဲဒီအချိန်မှာ ခေတ်စားတာတော့ DSA၊ ရေကြောင်း ဆိုတာကြီးပဲ။ လူတိုင်းလိုလို ဝင်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ ငွေကြေး၊ အဆက်သွယ် အင်အားတွေ အများကြီး လိုအပ်တော့ ကျွန်တော် လုံးဝကို စိတ်မဝင်စားခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ဖြစ်သင့်တာ ဖြစ်လာဖို့အစ်ကိုတစ်ယောက်က GTI လျှောက်လွှာကြီး ကိုင်ပြီး ကျွန်တော့ဆီ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ကြီး ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန် ကျွန်တော်က ရန်ကုန်မှာ အခြေခံ အီလက်ထရွန်းနစ် သင်တန်းတက်ပြီး ကိုဝင်းနိုင်ရဲ့Mectronic Safeguard မှာ အလုပ်လုပ်နေ ပါတယ်။ အစ်ကိုပေးတဲ့ လျှောက်လွှာကိုဖြည့်၊ ဦးစားပေး မေဂျာ နေရာမှာ (၁) Electronics (၂) Electrical Power ဆိုတာဖြည့်၊ ဦးစားပေးကျောင်းမှာ ကိုယ့်ဇာတိဒေသလို ဖြစ်တဲ့ မော်လမြိုင်ကိုဖြည့်၊ တင်လိုက်ပြီး စိတ်ထဲ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ပဲ ထားလိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ကျောင်းခေါ်စာ အိမ်ကိုရောက်လာ၊ ဖွင့်ဖတ်တော့ Electrical Power နဲ့မော်လမြိုင်ကျောင်း တက်ရမယ် ဆိုတော့ ကိုယ့်အထုပ်ကိုယ်ပြင်၊ အလုပ်ထွက်ပြီး ကျောင်းတော် ကြီးဆီ ချီတက် မိတော့တယ်။
သံဖြူဇရပ်မြို့ ရောက်တော့ အမေက `သား ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ ။ တို့ အမျိုးတွေ ကျောင်းမှာရော၊ မော်လမြိုင်မှာရော ရှိကြတယ်။ အမေလိုက်ပို့ ပေးမယ်။ ` ဆိုတော့ အားတော့နည်းနည်းရှိသား။ အမေဆီမှာ စိုးရိမ် ကြောင့်ကျစိတ်တွေ ရှိနေပေမယ့် အတတ်နိုင်ဆုံး အားပေးသံကို ကြားလိုက် မိတယ်။ ဒီလိုနဲ့အမျိုးတော်တဲ့ MT က ဆရာဦးအာတီး ဆီကို အမေလိုက်ပို့ ပေးတယ်။ ကျောင်းအကြာင်း အဆောင် အကြာင်း စုံစမ်း၊ အဆောင်နေ လက်မခံတော့ဘူး ဆိုလို့မော်လမြိုင်က အမျိုးအိမ်တစ်အိမ်မှာ နေဖို့ အမေလိုက်လံ ပြောဆိုပြီးနောက် သားတော်မောင်ကို ထားရစ်ပြီး အိမ်ပြန်သွားခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော် GTI ကျောင်းသား ဘဝ စခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့မြို့ ထဲကနေ အမှတ်(၈)ကားစီးပြီး ကျောင်းကို စသွားခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး ကျောင်းတက်တဲ့ နေ့ က အတန်းတွေ သိပ်မရှိပါဘူး။ ကျောင်းအဝင် မြေနီလမ်းနဲ့ရေတမာတန်းက ကျွန်တော့်ကို တော်တော်လေး ဆွဲဆောင်ပြီး အဲဒီကြားထဲမှ ရွှေဟင်္သာခန်းမကို လှမ်းမြင်နေရတာ။ အဲဒီ ပုံရိပ်ကို ကျွန်တော် တော်တော် နှစ်သက်ပါတယ်။ (နောင်အခါ ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းများ စုထုတ်တဲ့ ကဗျာစာအုပ်မျက်နှာဖုံးမှာ အဲဒီပုံရိပ် ခဲခြစ်ရာလေးနဲ့မြေနီလမ်းဆိုတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ် ကျွန်တော် ရေးပြီး ထည့်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုကဗျာကို ဒီနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)
မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်ရပ်အနေနဲ့Drawing ဆွဲဖို့T မရှိလို့ဆရာဦးအာတီး ရှိတဲ့ MT work shop ဖက် ပြေးရသေးတယ်။ ဆရာက နံရံမှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ T လေး ကျွန်တော့် ကိုပေးလိုက်တယ်။ ဒါနဲ့Drawing ခန်းထဲဝင် Drawing paper ပေါ် T လေးတင်ပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ပုံတွေ ဆွဲတော့တာပေါ့။ အဲဒီမှာ ပြဿာနာက စတော့တာပဲ။ T ကို workshop ကနေ ယူလာတုန်းက ကျွန်တော် သေသေ ချာချာ ဖုန်တွေ သုတ်လိုက် တာပဲ။ ဒါပေမယ့် စက္ကူပေါ်တင် ဆွဲတော့ အမည်းကြောင်း တွေမှ မနည်းပဲ။ ကျွန်တော့ ပုံဆွဲစက္ကူ အဖြုရောင်ကနေ အမည်းရောင် ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် ကြည့်ပြီး ဟားတိုက်သာ ရယ်လိုက်မိ တော့တယ်။
နေလည် ထမင်းစားချိန် ကျတော့ အခန်းထဲက သူငယ်ချင်း ကိုကိုငြိမ်းချမ်းက သူနဲ့လိုက်ခဲ့ဆိုလို့လိုက်သွားခဲ့တာ ဟိုရောက်တော့မှ ထမင်းစားဆောင် (မယ်ဇင်) ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ဆုံးလက်ကျန် အဆောင်နေ ကျောင်းသား စီနီယာတွေနဲ့အတူ ကျွန်တော်လည်း ရောယောင်ပြီး နေ့ လည်စာ ထမင်းကို ပဲဟင်း၊ ကန်စွန်းရွက်ကြော် လေးနဲ့စားပြီးနောက် ကျွန်တော် တော်တော်လေး နှစ်သက် သဘောကျ သွားမိပါသည်။ ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့ကျောင်းပထမဆုံးနေ့ကတော့ ကျေနပ် နှစ်သက် စရာလေးတွေ အပြည့်နဲ့ စတင်ခဲ့ပါတော့တယ်။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 07:286comments:
ဆရာကြီးဦးဝင်းမော်ထွန်းထံမှ ၁၃-၁၁-၀၉ ရက်စွဲနှင့် စာတစ်စောင်လက်ခံရရှိပါသည်။
ဆရာဦးဝင်းမော်ထွန်းမှာ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ အောက်တိုဘာလ ကန်တော့ခံဆရာများစာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး အားလုံးထံသို့ ပြန်လည်တုန့် ပြန်စာရေးသားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုစာအရ ဆရာကြီးသည် ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် သုတေသနဗဟိုဌာနတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေလျှက်ရှိပြီး နေရပ်လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်တို့ အားလည်း သိရှိရပါသည်။
(ဆရာကြီး ကျန်းမာ၊ချမ်းသာစွာနှင့် နိုင်ငံအကျိုးဆထပ်တိုး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ အားလုံးရဲ့ ကိုယ်စား ဆန္ဒပြုလိုက်ပါသည်။)
Letter from UWMT http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=22539687&access_key=key-1b2njbkrf8m0v69i6o5p&page=1&version=1&viewMode=list
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 01:18 No comments:
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 20:28 No comments:
မြန်မာ အက္ခရာသုံး ဒိုမိန်း အကြောင်း
ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုလ်း မြို့တွင် ကျင်းပ သော အင်တာနက် ဆိုင်ရာ အမည်နှင့် နံပါတ်များ ခွဲရေးအဖွဲ့ ၏ အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်မှ ၃၀ ရက်ထိ
ကျင်းပခဲ့သော အစည်းဝေး က အတည် ပြု ပေးလိုက်သည့် မိခင် ဘာသာဖြင့် ရေးသား နိုင်သော အင်တာနက် လိပ်စာများ (Uniform Resource Locator, previously Universal Resource Locator) တွင် ယူနီကုဒ်စံ သတ်မှတ်ချက်ကို လိုက်နာထားသည့် မြန်မာ အက္ခရာများကို စတင် သုံးစွဲနိုင်ပြီဟု မြန်မာစာ သုံး ဒိုမိန်းများ အတွက် ဝန်ဆောင်ပေးနေသည့် ကနောင် ဝဘ်ဒီဇိုင်း (http://kanaung.com) မှ အတည်ပြု ပြောဆိုခဲ့သည်။
ပထမဆုံး မြန်မာစာသုံး ဒိုမိန်း လိပ်စာ (Uniform Resource Locator, previously Universal Resource Locator) အဖြစ် ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် အင်တာနက် စာမျက်နှာ အတွက် http://www.ဧရာ.com ကို စတင်နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ တခြားသော စံများနှင့်လည်း ကိုက်ညီသည့် ဒိုမိန်း လိပ်စာများ အတွက်လည်း ဝယ်ယူ စုဆောင်း ထားကြောင်းလဲ သိရှိရသည်။
လက်ရှိ အခြေအနေတွင် ယူနီကုဒ် ဗားရှင်းများ အလိုက် သတ်မှတ်ထားသော စံကို လိုက်နာကျင်သုံး ထားသည့် မြန်မာ အက္ခရာများ နှင့် ယူနီကုဒ် စံ၏ စိတ်တပိုင်းကို လိုက်နာထားသည့် de facto standard ဇော်ဂျီ စာလုံးများကြားတွင် မိမိအသုံးပြုမည့် လိပ်စာအား မည်သည့် standard၊ မည်သည့် de facto standard သုံး အက္ခရာဖြင့် ဝယ်ယူမည်ကို အဓိကထား စဉ်းစားရမည့် အချက်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့မှသာ သုံးစွဲသူများ အနေဖြင့်အဆင်ပြေမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
http://www.ဧရာ.com ကို မည်သည့် စာလုံး စံနစ်ဖြင့် ရေးသားထားသည် ဖြစ်ပါစေ အဆင်ပြေမည် ဖြစ်သော်လည်း၊ မဇ္စျိမ ဟူသော စကားလုံးအား de facto standardသုံး ဇော်ဂျီ ရေးသားပါက တမျိုးဖြစ်မည် ဖြစ်ပြီး၊ တခြားသော standard အတိုင်း ရေးသားပါက နောက်တမျိုးဖြစ်မည် ဖြစ်သောကြောင့် သုံးစွဲမည့်သူအတွက် များစွား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်လာမည်သာ ဖြစ်သည်။
သို့အတွက် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ် ပြုထားသော စံအတိုင်း ရေးသားထားသော အက္ခရာ များကို သုံးစွဲလာပါက နောက်တွင် ပိုမို အဆင်ပြေ လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်။ လောလောဆယ်တွင် မြန်မာ အက္ခရာများကို .com .net များဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်သော်လည်း၊ .org အား ရောင်းချခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရှိရသည်။
လက်ရှိ အခြေအနေတွင် သုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် http://www.ဧရာ.com ရိုက်ပြီး သွားရောက်နိုင်ပြီ ဖြစ်သော်လည်း၊ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာမျက်နှာကို ရောက်သွားပါက http://www.xn--fjdxq.com/ သို့ ပြောင်းလဲသွားအောင် လုပ်ဆောင် ထားသည် ကို တွေ့ရှိရမည်။
xn--fjdxq ကို ဧရာ ဟု နည်းပညာအရ အသိအမှတ် ပြုထားပြန်သည် ကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်။ ဆာဗာ ထိုင်ထားသည့် ဒိုမိန်းအမည် စံနစ် Domain Name System (DNS) အား မိခင် ဘာသာ စကားသုံး အက္ခရာများ ဖြစ်ရန်ကိုမှု ၂၀၁၀ စောင့်ဆိုင်းရန် လိုကြောင်း သိရှိရသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ အခုလိုနည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူစရာပါ...gmail ထဲက ကြိုက်လို့ ပြန်ရေးထားတာပါ
အားလုံး mingalar ပါ..
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 19:51 No comments:
How To Come To Singapore? Part 3
(ဒီပို့စ်က အရင်တုန်းကတင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ www.mongti.com hack ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ချို့သော ပို့စ်များကို Backup မလုပ်ထားမိသဖြင့် ဒီပို့စ် ကိုပြန်လည်တင်လိုက်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိအချိန်တွင် ကမ္ဘာ တဝန်းလုံး စီးပွါးရေးအခြေအနေ ကျဆင်းနေသောအခြေနေ ဖြစ်နေသောအချိန် ဖြစ်သည့်အတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့စွန့်စားထွက်လာပြီးအလုပ်ရှာဖို့ရာ စဉ်းစားစရာပင် ဖြစ်နေပါပြီ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဒီပို့စ်ကတော့ စွန့်စားထွက်လာသူများအတွက် အကယ်၍ အလုပ်ရလျှင် အထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ အခုလက်ရှိ စင်ကာပူတွင်လည်း အလုပ်သမားများနဲ့ သက်ဆိုင်သော ပေါ်လစီများကို ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် mail box ထဲသို့ ရောက်လာသော MOM မှ ပြင်ဆင်လိုက်သော အချက်အလက်များကို ကျွန်တော်တို့၏ ညီတော်မောင်များသိစေချင်သည့်အတွက် Power Point Presentation file ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင် ဒေါင်းပြီးဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။)
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 10:01 No comments:
အဲဒီညက ခြိမ်းသောမိုးမျိူး ဒီတစ်သက်မှာကျွန်တော်တစ်ခါမျှပင် မတွေ့ ဖူးပါ။ ဒီဒေသကို အမှန်တစ်ကယ်စွန့် ခွာတော့မည်ဆိုမှ ရင်မှာဆို့ နင့်ကြေကွဲ လာသည်။ ငြင်းဆန်မရသော ဖိအားတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ကျောခိုင်းခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်သည် အခွံချွပ်ထားသော မျောက်တစ်ကောင်သာ ဖြစ်သည်။
(၁) ကျွန်တော်နှင့် မျိုးရိုးဗီဇ
“ အမေတို့ မျိူးရိုးဟာသာမန်မဟုတ်ဘူး။ အခု လူလို့ ခေါ်တဲ့ သတ္တာဝါတွေဟာ အမေတို့ ဆီကဆင်းသက်တာ။ အမေတို့ ဟာ မျောက်မျိူးစိတ်ထဲမှာ အမြင့်ဆုံး အမြတ်ဆုံး။ ဒါကို ဂုဏ်ယူတတ်ရမယ်သား"
အမှန်တော့ ကျွန်တော်သိပ်နားမလည်ပါ။ တန်ဖိုးတစ်ခုကို ဘာပေတံနဲ့တိုင်းတာသလဲ။ ထာဝရအမှန် အမှားဆိုတာရော တကယ်ရှိသလား။ ကိုယ့်မျိုးရိုးကို ဂုဏ်ယူတတ်ဖို့တခြားသူကိုထိခိုက်စရာလိုသလား။
တကယ်တမ်းတော့ အဖေကျွန်တော့်ကို စိတ်ပျက်နေတာ ကြာပြီ။ ပြောရရင် အဖေက ဒီဒေသမှာ အကုန်လုံး လေးစားခင်မင် အားကိုးမှုကို ရထားသူ။ မျက်နှာကြီးပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ (အဖေ့စကားအရ) စောက်တလွဲကောင် မျိုးရိုး သိက္ခာချတဲ့ကောင် မျိုးမစစ်ကောင် စသည်ဖြစ် နာမည်မျိုးစုံ ခေါ်ဝေါ်သမုတ် ခံရလေ့ရှိသည်။ (သူ့ လိုဖြစ်စေချင်တဲ့ အဖေရဲ့ စေတနာကိုတော့ ကျွန်တော်နားလည် ခံစားရ ပါတယ်)
(၂) ကျွန်တော်နှင့် ပြင်ပလောက
ကျွန်တော်အရွယ်ရောက်တော့ စူးစမ်းချင်သောစိတ်က အတောမသတ်နိုင်သေး။ ရွယ်တူတွေက မျောက်တို့ တတ်အံ့သောကိုယ်ခံပညာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာအတတ်ပညာများ သင်ယူလေ့လာ တတ်မြောက်ဖို့အသီးသီးကြိုးစားနေကြချိန်မှာ ကျွန်တော်က ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစူးစမ်းမှုတွေလုပ်၊တခြားမျိူးမတူတဲ့သတ္တဝါတွေဆီသွားပြီးသူတို့ ရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေလေ့လာ၊ ဒီလိုနဲ့ ပဲ ကျွန်တော်ဟာ ဘာသာစကားမျိုးစုံတတ်ကျွမ်းလာသည်။
မျိုးရိုးမတူတဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများရဲ့ မှတ်ချက်တွေ အယူအဆတွေ နားထောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော် တို့ မျောက်မျိုးရိုးတွေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကပ်သီးကပ်သပ် ဂုဏ်ယူနေကြတာကို နားလည်လာသည်။ အင်းအား ပါဝါ တွေ ကြီးလာအောင် ကြိုးစားပြီး ကိုယ့်ထက်အားနည်းတဲ့ သူတွေအပေါ် လွှမ်းမိုးအနိုင်ယူချင်နေတာတွေ နားလည်လာသည်။
သူတို့ ကတော့ ကိုယ့်မျိုးရိုးကို ကာကွယ်ခြင်းလို့ နာမည်တပ်ထားကြသည်။ မျိုးရိုးဝါဒတွေ နေ့ တိုင်း သင်ကြားပြီးတော့ ပုံစံသွင်းထားကြသည်။
သို့ နှင့် ပြောဆိုဆုံးမ၍ မရသော ကျွန်တော့ကို တစ်နေ့ အဖေက ခေါ်ပြီး
"မင်းးဒီဒေသမှာ နေချင်ရင် ငါတို့ ပြောတာလိုက်နာ ဒါမှမဟုတ် ဒီကထွက်သွား” လို့ တစ်ခွန်းတည်း ပြောလေသည်။
(၃) ကျွန်တော်နှင့် ကတ္တီပါလမ်းခွဲ
ဒီမြေမှာကြီး ဒီလေကို ရှူရှိက်ပြီး အသက်ရှင်သန်လာခဲ့သော ကျွန်တော့ရဲ့ သွေးကတော့ ဒီမျိူးရိုးစစ်စစ်ပါ။ ဒါပေမယ့် မတူညီတာတွေ ဝတ်ဆင်ချင်ခဲ့သူ မတူညီမှုတွေကို အလှတရားတစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းစပ်ချင်ခဲ့သူ တစ်ဦးသာဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်က စွန့် ခွာသွားခဲ့တာလား ကျွန်တော့ကို စွန့် ခွာသွားခဲ့တာလား မသေချာပေမယ့် ဒီဒေသကတော့ ကျွန်တော့ရင်ဘတ်ထဲမှာ စွဲမြဲစွာ ကျန်ရစ်နေဆဲပါ။ တစ်နေ့ ဒီမြေနဲ့ ဒီလေကို ပြန်လည် ရှုရှိုက်ခွင့် ရလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ထားပါသည်။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်သည် အခွံချွပ်ထာားသော မျောက်တစ်ကောင်သာ ဖြစ်သည်။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 03:47 No comments:
မျှော်လင့်ခြင်းတွေကို ရင်ဘတ်ထဲထည့်လို့ 
အဲဒီ ရင်ဘတ်ထဲ ကောင်ဟာ
ကမ္ဘာကြီးကို မျှော်ကြည့် ရင်း
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 07:08 1 comment:
(အရင်တုန်းက Little Buddha ဆိုတဲ့ movie ကို ကြည့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရာဇဝင်ကို ဟောလိဝုဖ်က ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ ဗုဒ္ဓဝင်နဲ့လူဝင်စားဇာတ်လမ်းကို အခြေခံရိုက်ကူးခဲ့ပြီး မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတွေအမြင်မှာတော့ တစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ယခု movie preview မှာတော့ သိဒ္ဓမင်းသားရဲ့ ဘဝဖြစ်စဉ်ကို သဘာဝကျအောင် ရိုက်ကူးထားတာတွေ့ ရပါတယ်။ အရှေ့ တိုင်းစာပေအမြင်နဲ့အနောက်တိုင်းက ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ နားလည်မှု ဘာတွေကွာခြားသလဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မမေ့ဖို့ လိုအပ်တာက ဗုဒ္ဓဟာ နီပေါမှာပွင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။ )
အားလုံးပဲ အလုပ်အားရက်မှာ စိတ်ချမ်းသာ၊ကိုယ်ချမ်းသာစွာနဲ့ သီလ၊ဒါန၊ဘာဝနာ ကုသိုလ်များ ပွားများနိုင်ကြပါစေ။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 00:08 No comments:
မကြာခင် ဈေးကွက်ထဲသို့ ရောက်ရှိလာတော့မည့် စွမ်းအင် ၃ဆမြင့် Rechargeable Zinc-AirBatteries
Swiss Company တစ်ခုမှလာမည့်နှစ်တွင် Lithium ion batteries ထက် စွမ်းအင် ၃ဆ သိုလှောင်နိုင်ပြီး ဈေးနှုန်းထက်ဝက်ချိုသော rechargeable Zinc-air batteries များကို ဈေးကွက်ထဲသို့ စတင်မိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုက်ပါသည်။ ၄င်းကို hearing aids အတွက်သုံးမည့် Small button cells အဆင့်မှ Cell Phone, Electric bicycle နှင့် Electric Vehicles များတွင်သုံးရန် အကြီးစား larger batteries နှင့် large-format batteries များထိ ထုတ်လုပ်ရန် ရည်ရွယ်ထားကြားသိရှိရပါတယ်။
သာမန်အားဖြင့်ဈေးကွက်ထဲတွင် non-rechargeable zinc-air batteries များကို ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပြီးဖြစ်သော်လည်း ယခုထုတ်လုပ်မည့် rechargeable zinc-air batteries အတွက်တော့ နည်းပညာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
၄င်း zinc-air batteries နည်းပညာသည် သာမန် batteries များလိုမဟုတ်ဘဲ လေထဲတွင် ပါဝင်သော Oxygen ကိုအသုံးချပြီး လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖတ်ရှုရပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုဖတ်ရှုလိုလျှင် မူရင်းလင့် ဒီနေရာမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 21:07 1 comment:
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 04:23 No comments:
ခင်မင်လေးစားရပါသော ဆရာ ဆရာမများနှင့် သူငယ်ချင်းများခင်ဗျား
ကျွန်တော်တို့ပြည်ပရောက် Mon GTI/GTC/GTU ကျောင်းသူကျောင်းသားများရဲ့ဆရာကန်တော့ငွေကိုအောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်ရှိမကေသီထွန်းထံမှတဆင့်ပေးပို့လှုဒါန်းဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါပုံကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ Oct 09 အတွက် ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးများထံသို့ ကန်တော့ရန် ပေးပို့ထားသော ငွေလွှဲ ဖြတ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
သောင်းဆွေဝင်း ( 95 MP )
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 06:24 No comments:
ဆရာအောင်သင်းနှင့် ရေကြည်ရာမြက်နုရာ အပိုင်း(၂)
နောက်တစ်ခုကစွန့်တယ်ဆိုတာ စားရဖို့ဆိုပြီး ဟောပြောတဲ့နေရာမှာ ဆရာကြီးသုံးနှုန်းခဲ့တာရှိပါတယ်။ အဲဒါကိုဘယ်လိုသဘောပေါက်ရမလဲ။
ဟုတ်တယ်။ အဲဒါလည်းငါ . . . ခွဲသုံးခဲ့တာပါပဲ။ မစွန့်ဘဲနဲ့မစားရဘူး။ စွန့်မှပဲစားရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ။ အဲဒါ မှာ လူကြီးတွေမှာဖြစ်စေ၊ လူငယ်တွေမှာဖြစ်စေ၊ ကလေးပေါက်စမှာဖြစ်စေ စွန့်စားတတ်တဲ့ စိတ်ကတော့ ရှိတာချည်းပဲ။ တိရစ္ဆာန်တွေတောင်မှ စွန့်စားတာပဲ။ animal courage ခေါ်တာပေါ့။ ကလေးမှာလည်း စွန့်စားချင်တဲ့စိတ် ရှိတာပဲ။ ဒါကြောင့်မို့ ကလေးကိုလက်တွဲလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ နည်းနည်း သူ လမ်းလျှောက် လာနိုင်ရင် သူ့ကိုလက်တွဲတာမကြိုက် ဘူး။ အတင်းရုန်းတယ်။ ပြီးတော့မှလဲချင်လဲမယ်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ သူ့ခြေထောက်ပေါ် သူရပ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ သဘောပဲ။ အခုပြောနေတဲ့ရေခြားမြေခြားသွားတဲ့ကိစ္စမှာ တိုင်းတစ်ပါးကို ထွက်ခွာသွားပြီ ဆိုကတည်းက စွန့်သွားတာပဲ။ အဲဒီတော့စွန့်ပြီးတော့ မစားရဘူးဆိုရင် ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းညံ့ဖျင်းလို့ပဲ။ ဟိုမှာနေရာမှားတာလား။ ကျင့်သုံးပုံမှား တာလား။ သို့မဟုတ် လုပ်ပုံကိုင်ပုံမှား တာလားမသိဘူး။ ပုံသေတာကတော့ စွန့်ရင်စားကိုစားရမှာပေါ့။ မစားရလို့ရှိရင် တစ်ခုခု မှားနေပြီ။ အဲဒီတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြန်တွက်ကြပေါ့။
အခုပညာခေတ်မှာ တချို့ပညာရေးအားမပါတဲ့လူငယ်တွေက ''ပိုက်ဆံရှာဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။ ပညာမတတ် လည်းဖြစ်တယ်။ ဆယ်တန်းမအောင်လည်းဘာဖြစ်လဲ . . . နိုင်ငံခြားထွက်မယ်'' ဆိုပြီး ကြွေးကြော်နေ ကြတာရှိပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ ဆရာကြီးအမြင်ဘယ်လိုပါလဲ။
အရင်တုန်းကမလေးရှားမှာ ''ဟဲ့ . .စာကြိုးစား။ နင်အောင်လို့ရှိရင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုပို့ပေးမယ်'' လို့ ပြောခဲ့ကြတာ။ ဒါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ စင်ကာပူ ဟာ(၁၉၅၉)ခုနှစ် လွတ်လပ် ရေးရတယ်။ တို့က (၁၉၄၈)ခုနှစ်ရတယ်။ လီကွမ်ယူက သူတို့လွတ်လပ်ရေးယူခါနီးမှာတို့ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကိုလာတယ်။ သူက ဘာပြောသလဲဆိုရင် ''လာမယ့်နှစ်အစိတ်၊သုံးဆယ်ကျရင် မြန်မာပြည်ရဲ့အဆင့်ကို ကျွန်တော်မီအောင်ကြိုးစားမယ်''လို့ပြောခဲ့တာ။ သူက brain drain အဖြစ်မခံတဲ့အပြင် သူ့ဆီက ကလေးတွေအကုန်လုံးကို west education အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန် အကုန်ပို့ ပေးတယ်။ လီကွမ်ယူယူတဲ့ပုံစံက အနောက်နိုင်ငံက education တွေချည်းပဲ။ ပို့ပြီးတော့ သူ့တိုင်းပြည်ကို သူပြန်လုပ် တယ်။ သူ့တိုင်းပြည်က သယံဇာတထွက်တဲ့ တိုင်းပြည်မဟုတ်ဘူး။ ရေတောင်ဝယ်သောက်နေရတာ။ ဘာမှမထွက်တဲ့ အခါကျတော့ လူကို အကောင်းစားဖြစ်အောင်လုပ်တာ။ အခုဒီက ကလေးတွေဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုငါပြောမယ်။ သူတို့က ''ဆယ်တန်းအောင်လည်းဘာဖြစ်မှာလဲ'' ဆိုတာကိုပြောတယ်။ ကောင်းပြီ။ ''ဆယ်တန်းကိုတန်ဖိုးမထားလို့ မင်းအခုဘာတွေ လုပ်နေလဲ''လို့ပြန်မေးလိုက် ရင်ဘာမှပြောစရာထွက် မလာတော့ဘူး။ ဘွဲ့ရပြီးတော့ကော ဘာလုပ်မှာလဲ။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ စာရေးလုပ်၊ ဘာလုပ် . . လုပ်နေရတာပဲဆိုတဲ့သူတွေ ''ကောင်းပြီ မင်းကဘွဲ့မယူတော့ဘူးဆိုရင် မင်းကအဲဒီဘွဲ့နဲ့တန်းတူဖြစ်အောင် အခု ဘာတွေလုပ်နေတုန်း''လို့မေးရင် သူတို့မှာအဖြေမရှိဘူး။ လမ်းသွားပြီး တော့ ဂိမ်းဆိုင်ထိုင်နေမယ်။ ဘိလိယက်ထိုးနေမယ်။ ဒါမှမဟုတ် အရက်ဆိုင်ထဲရောက်နေမယ်။ အဲဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတာ။ အရေးကြီးတဲ့ အချက်ကတော့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် အချိန်ကိုဘယ်လိုအသုံးချလဲ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အစွမ်းအစသိချင်ရင် သူ့ရဲ့အချိန်ကိုဘယ်လို အသုံး ချကြည့်လဲ။ ဒါပါပဲ။ တရုတ်ကျတော့သူ့ရဲ့ brain drain ကို brain gain ပြန်ဖြစ် ပြန်ဖြစ် အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီအတွက် သူတို့အလား အလာက ဘယ်လို ရှိခဲ့လို့လဲ။ သူတို့က လူဦးရေများလွန်းတော့ သွားမယ်ဆိုလည်း သွားပါစေပေါ့။ ကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားမှာ ဘယ်နေရာမဆိုတရုတ်ဆိုတာရှိရမယ်။ ဒါသူ တို့ရဲ့စသူငခပပဲ။ ဟိုးအရင်ကလည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ any corner of the world . . . အဲဒီမှာတရုတ်ရှိမယ်။ သူကအဲဒီအတွက် နိုင်ငံခြားကို လွှတ်တာပဲ။ ပြီးတော့ပညာတတ်တဲ့သူတွေကို ပြန်စုနေတာပဲ။ အခုပြန် စဉ်းစားကြည့်ပါလား။ တရုတ်ပြည်ဟာ မော်စီတုံးခေတ်ကိုလည်း ရောက်ရော အဝေးရောက်တရုတ်တွေ ပြန်ခေါ်လိုက်တာပဲ။ တရုတ်က အဲဒီလိုသွားတာ။ တကယ့်တကယ် မင်းတို့ပြန်တွက်ကြည့်ရင် ကွန် မြူနစ်တော်လှန်ရေးကြီးအောင်မြင်သွားလို့ မော်စီတုံးတက်လာ တော့ သူတို့ဆီမှာ အတတ်ပညာရှင်ရှိမှမရှိတာ။ နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့သူတို့ လူမျိုး အတတ်ပညာရှင်တွေ ပြန်ပြီးခေါ်ခဲ့ရတာ။ အမှန်က brain ကို drain လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ brain ကို reflection လုပ်လိုက်တာပဲ။ အဲဒီနည်းနဲ့ တရုတ်ဟာ atomic energy တို့၊ ဂြိုဟ်တုလွှတ် တာတို့လုပ်နိုင်တာပေါ့။အခုဒီကနေနိုင်ငံခြားသွားပြီးဟိုမှာကူလီလုပ်ပြီးပြန်လာရုံသက်သက်နဲ့တော့ ဘာပါလာမှာလဲ။
ဆရာကြီးဆိုလိုချင်တာက ဟိုမှာအလုပ်လည်းလုပ်၊ သူ့ဆီကလည်းယူလာခဲ့ပေါ့။ ဟုတ်လား။
နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေကိုမှာချင်တာကတော့အဲဒီနိုင်ငံခြားမှာကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကင်းကွာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မပျက်စီးကြပါစေနဲ့။ အဲဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ပင်ပန်းတယ်။ ပင်ပန်းလို့အပန်းဖြေရင်မိမိကိုယ်ကိုပျက်စီးစေမယ့်အပန်းမျိုးမဖြေနဲ့။ အဲဒီလိုဖြေခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံခြားရောက်နေလို့ ဘာမှအကျိုးအမြတ်မထွက်ဘဲနဲ့ပျက်စီးတဲ့သူအဖြစ်နဲ့အဖတ်တင်ကြလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါကျရင်မင်းရဲ့အနာဂတ်ကအရင်းအနှီးလည်းဆုံး၊အမြတ်လည်းမရ။ အဲဒီလိုဖြစ်မှာပဲ။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 03:58 No comments:
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 03:56 No comments:
လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ လမ်း (၂)
လူငယ်နှင့် စွန့် စားခြင်း
လူငယ်မှန်ရင် စွန့် စားရဲရမယ်လို့ တော့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက နားလည်ထားတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဆရာဖွင့်ဆို ပြသွားတဲ့ စွန့်တယ်ဆိုတာ စားရဖို့ လို့ တော့ စိတ်ထဲသိပ်မရှိပါဘူး။ အများအားဖြင့် နားလည်ထားတဲ့ ပုံစံကတော့ လောင်းကစားလုပ်သလို ကိုယ့်ရှိတာ ထိုးပြီး အမြတ်လိုချင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ အနည်းဆုံးတော့ အရင်းပြန်ရဖို့မျှော်လင့်ကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပဲ ကျွန်တော်လည်း မိဘရဲ့ ရှိစုမဲ့စု အိမ်ခြံပေါင်ပြီး ဘဝကို လောင်းကစားလုပ်ခဲ့တယ် ဆိုပါစို့ ။ အရင်းအနှီး ကတော့ ဆရာပြောတဲ့ အမျိုးအစားတွေ အပြင် ကိုယ့်အတ္တ မာန အားလုံးကို ပေးဆပ်လိုက် ရတယ်။ အလုပ်တစ်ခုရဖို့ပင်ပန်းရခြင်း၊ ဒီအလုပ်မှာ အဆင်ပြေဖို့ရုန်းကန်ရခြင်း၊ အလုပ်ရှင် ပြောသမျှ ဆိုသမျှ ခေါင်းငုံ့ ခံ နေရခြင်း စသည်ဖြင့် ကျွန်တော်တို့ နဲ့အံဝင်အောင် ကိုယ်ကိုကိုယ် အားလုံးပြောင်းလဲ ပစ်ပေါ့။ လူတစ်ချို့ တော့ အဆင်ပြေကြပါတယ်။ တစ်ချို့ ကတော့ လိမ်ဖယ် လိမ်ဖယ် နဲ့ ပေါ့။ ကျွန်တော့ အတွက်တော့ ဘဝဆိုတာ ရုန်းကန်ခြင်း လို့ နားလည်ထားတော့ သိပ်မထူးဆန်းတော့ပါဘူး။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 14:24 No comments:
လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ လမ်း (၁)
တစ်နေ့ က ဆရာဦးအောင်သင်းနဲ့ ခေတ်ပြိုင် အင်တာဗျူး ပြီးတော့ လျှပ်တစ်ပြက်နဲ့ အင်တာဗျူးလေးတွေ ဖတ်ရလို့စဉ်းစားမိရာကနေ ဒီစာလေးရေးဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ တကယ်တော့ ဆရာဦးအောင်သင်းဆိုတာ ကျွန်တော်တို့လူငယ် တွေရဲ့ ဘဝမှာ အတွေးအခေါ်ပိုင်းကို အနည်းနဲ့ အများတော့ လွှမ်းမိုးထားလေ့ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ ဆုပန်ခြင်း ကွာခြားတာ၊ လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကို ဘယ်လိုထားရမယ် ဆိုတာ သင့်တော်တဲ့ ပုံပြင်တွေ ဥပမာတွေ နဲ့ရဲရဲတောက် ဟောပြောခဲ့တာတွေ အများကြီး ဖတ်ခဲ့ မှတ်ခဲ့ ရပါတယ်။ ပြောတဲ့စကားတိုင်းမှာ စေတနာ တွေအတိုင်းသား မြင်နေရပါတယ်။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 03:14 No comments:
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 03:27 No comments:
သစ်ပင်သည် တစ်နှစ်တစ်ခါ ရွက်ဟောင်းကြွေ၍ ရွက်သစ်လောင်းလေ့ရှိသည်မှာ လောကဓမ္မာတာပင်ဖြစ်သည်။ သို့ သော် ကျွန်တော်တို့ ၏ ဤ website မှာကား အခုတစ်မျိုး တော်ကြာတစ်မျိုးနှင့် ပြောင်းလိုက် လဲလိုက် ဖြစ်နေသည်မှာ မျက်စိရှုပ်စရာပေတည်း။ အတတ်လွန်ကျူး၍ အပြောင်းလဲများနေခြင်း မဟုတ်သလို လက်တည့်စမ်း၍ စမ်းသပ်နေခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံး အဆင်ပြေအောင် ကြိုးစားနေကြခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 10:48 No comments:
(ဤသမိုင်းအကျဉ်းကို ၁၂ ကြိမ်မြောက် ဂျီတီအိုင်ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများ အာစရိယပူဇော်ပွဲ အမှတ်တရအဖြစ်ထုတ်ဝေသော ဂျီတီအိုင် ပုံရိပ်သမိုင်းမှတ်တမ်းများ စာအုပ်မှ ထုတ်နှုတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်ကို သမိုင်းပြုစုရေးကော်မတီမှ ကန့် သတ်ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မော်လမြိုင် GTI/GTC/GTU ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ဗဟုသုတရစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖော်ပြအပ်ပါသည်။)
မော်လမြိုင်စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်းကို ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းဝင်းသည် အကျယ်အဝန်း ၂၃၂.၆၂ ဧကရှိပြီး စက်မှုစိုက်ပျိုးနှင့် အသက်မွေးပညာဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ ကျောင်းဝင်းအတွင်းတွင် စာသင်ဆောင်နှစ်ဆောင်၊ ဝပ်ရှော့အဆောက်အဦး၊ ဝပ်ရှော့ငယ်နှင့် စတိုခန်း၊ ကျောင်းခန်းမ၊ ဓါတုဗေဒနှင့် ရူပဗေဒစမ်းသပ်ခန်း၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးရုံးခန်း၊ စာကြည့်တိုက်နှင့် ကျောင်းသားအိပ်ဆောင် လေးဆောင် တည်ရှိပါသည်။ ထို့ ပြင် ကျောင်းအုပ်ကြီးနေအိမ်၊ ဆရာများဆောင်၊ အမှုထမ်းများတန်းလျား စသည်တို့ လည်း တည်ရှိ၏။
(၂) ပထမဆုံး ကျောင်းအုပ်ကြီး
ကျောင်းစဖွင့်လှစ်စဉ် အလုပ်ရုံမှုး (Workshop Superintendent) ဆရာ ဦးဌေးဝင်းအား တာဝန်ခံကျောင်းအုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ ပါသည်။ ဆရာဦးဌေးဝင်းသည် ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးအဖြစ် ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ မှ ၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့ အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့၏။
ဆရာကြီး ဦးဌေးဝင်း လက်ထက်တွင် ရေနှင့်လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်းရေး၊ ခြံစည်းရိုး၊ ချဉ်းကပ်လမ်း စသည့်လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ အရ ဝန်ထမ်းအင်အား ၉၁ ဦးအထိ ပြည့်မှီအောင်ခန့် အပ် စီစဉ်ခဲ့သည်။
(၃) ကျောင်းအုပ်ကြီး အပြောင်းအလဲ
၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့ တွင် မော်လမြိုင်ဂျီတီအိုင် ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ် ဆရာကြီး ဦးအောင်သန်းအား ခန့် အပ်ခဲ့ ပါသည်။ ဆရာကြီး ဦးအောင်သန်းသည် B.Sc Engg.(Mechnical) ဘွဲ့ ရဖြစ်ပြီး ၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၄ ရက်အထိ ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
ဆရာကြီး ဦးအောင်သန်းလက်ထက်တွင် မော်လမြိုင်စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ ကျောင်းကြီး အဖက်ဖက်မှ တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဆရာကြီး ဦးအောင်သန်းမှာ ယခုအခါ ကွယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်ပါသည်။
(၄) ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦးသန်းဆွေ
ဆရာကြီး ဦးသန်းဆွေသည် ဆရာကြီး ဦးအောင်သန်း၏ ရာထူးကို ဆက်ခံလျှက် ၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့ တွင် ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီးအဖြစ် ခန့် အပ်ခံခဲ့ရသည်။ ဆရာကြီးသည် A.G.T.I (Civil) ဒီပလိုမာရ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာကြီး ဦးသန်းဆွေကို ၁၉၃၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၀ ရက်နေ့ တွင် ဦးဟိန်ရင်နှင့် ဒေါ်ကြင်နုတို့ ဖွားမြင်ပါသည်။ ဇာတိမှာ သထုံခရိုင်၊ ပေါင်မြို့ဖြစ်သည်။ ဆရာကြီးသည် မော်လမြိုင်မြို့မော်တလိန်းကျောင်းမှ အလယ်တန်းအောင်မြင်ပြီးနောက် ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် မော်လမြိုင်မြို့စက်မှု အထက်တန်း ကျောင်းသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထို့ နောက် ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် အင်းစိန်စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံတွင် မြို့ပြ ဘာသာရပ်ဖြင့် ကျောင်းသို့တက်ရောက် သင်ကြားခဲ့၏။
၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် A.G.T.I (Civil) ဒီပလိုမာရရှိပြီးနောက် ကရင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း (P.W.D) တွင် ဒုတိယလက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာအဖြစ် ဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့၏။ ထို့ နောက် ရုရှားနိုင်ငံသို့ခြောက်နှစ်ကြာပညာတော်သင် သွားရောက်ခဲ့ပြီး M.Sc Engg.cons;technology ဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးနောက် ဆောက်လုပ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ဦးစီးအရာရှိ(တ)အဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့ပါသည်။
ထို့ နောက် ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးဂျီတီအိုင်၊ ထို့ နောက် ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် ချောက်ဂျီတီအိုင်တို့ တွင် ထာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့၏။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် မော်လမြိုင် စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံသို့ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ ခန့် အပ်ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆရာကြီး ဦးသန်းဆွေသည် မော်လမြိုင် ဂျီတီအိုင်ကျောင်းအုပ်အဖြစ် ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့ အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ကာ စက်မှုစိုက်ပျိုးနှင့် သက်မွေးပညာဦးစီးဌာနသို့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ ခဲ့ရ၏။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ဆရာကြီး အငြိမ်းစား ယူသွားပါသည်။
(၅) ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီး အဆက်ဆက်
ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦးသန်းဆွေပြောင်းရွှေ့ သွားပြီးနောက် ဆရာဦးမျိုးလွင် တာဝန်ခံကျောင်းအုပ်ဖြစ်လာပါသည်။ ဆရာဦးမျိုးလွင်သည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့ နောက် ဆရာဦးမြင့်ဌေး ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဖြစ်လာသည်။ ဆရာဦးမြင့်ဌေးသည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၀ ရက်နေ့ အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဦးကျော်ဝင်းသန်း ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဆရာကြီး ဦးကျော်ဝင်းသန်းသည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့ အထိ ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ရပြီး ဆရာကြီး ဦးဌေးအောင် ကျောင်းအုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ အင်းစိန်စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ ရာပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပချိန်တွင် မော်လမြိုင်စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးမှာ ဦးဌေးအောင်ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာကြီး ဦးဌေးအောင်သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ အထိ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
(၆) နည်းပညာကောလိပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခြင်း
မော်လမြိုင် စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံတွင် ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦးဌေးအောင် တာဝန်ယူဆဲကာလ ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ တွင် အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်လိုက်ပါသည်။ နည်းပညာကောလိပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသောအခါ အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်များအပြင် သတင်းနည်းပညာသင်တန်းကဲ့သို့ သော အခြားဘာသာရပ်သင်တန်းများ ပါဝင်လာပါသည်။ ထို့နောက် ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့ တွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါသည်။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 03:42 No comments:
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 05:52 No comments:
မော်လမြိုင် GTI/GTC မိသားစု(Singapore)၏ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် စုပေါင်းဘုံကထိန် ဓါတ်ပုံများ
ဒုတိယအကြိမ်မြောက် စုပေါင်းဘုံကထိန်ကို စင်ကာပူရောက် မော်လမြိုင် GTI/GTC ကျောင်းသား/သူ ဟောင်းများ မိသားစုက ၁၇-၁၀-၂၀၀၉ နေ့၊ တိုပိုင်းယိုးမြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
ကထိန်အလှူသို့ တရားနာလာရောက်ခဲ့ကြသော ဆရာ၊ဆရာမများ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ မိတ်ဆွေများ၊ အလှူဖြစ်မြောက်ပြီးစီးအောင် အစမှအဆုံးမမောမပန်း ဝိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ကိုင်ပေးကြသော သူငယ်ချင်းများ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
မော်လမြိုင် GTI/GTC ကျောင်းသား/သူဟောင်းများ (Singapore)
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 01:46 No comments:
ခင်မင်လေးစားရပါသော ဆရာ၊ဆရာမများနှင့် သူငယ်ချင်းများ
ပြီးခဲ့တဲ့ September လအတွက်ပေးပို့လှူဒါန်းထားသော အလှူငွေနှင့် ဆရာ၊ဆရာမ စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ Attached file ကတော့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ လက်ရှိလက်ကျန်ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 03:11 No comments:
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 03:08 No comments:
လွန်ခဲ့သော စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ၊ NTU Alumni Club တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ပထမအကြိမ် Mon GTI/GTC ကျောင်းသူ ကျောင်းသားဟောင်းများ တွေ့ ဆုံပွဲနှင့် မိတ်ဆုံစားပွဲမှ ဓါတ်ပုံများကို ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 01:20 No comments:
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နောက်ကျသွားခဲ့ရသော ကထိန်ဖိတ်စာနှင့် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို အခုမှ တင်ပေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုဒ်ကတော့ အပြောင်းအလဲထပ်ဖြစ်ပါပြီ။ အဆင်မပြေမှုတွေကိုလည်း တောင်းပန်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ ဒီလိုထပ်မဖြစ်ပါစေနဲ့ လို့ပဲ ဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်။ လိုလိုပိုပို www.mongti.co.cc ကို ကျွန်တော် mirror ဆိုဒ်အနေနဲ့ ဖန်တီးထားပါတယ်။ ဒီဇိုင်းအပြင်အဆင်ကစလို့ပို့ စ်တွေအား လုံး တူညီအောင် လုပ်ထားပါတယ်။ မကြိုက်တဲ့သူတွေတော့ ရှိမှာပါ။ အကြံကုန် ဂဋ္ဌုန်ဆားချက်ဆိုသလိုပေါ့။ နားလည်ပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 05:14 No comments:
မော်လမြိုင် GTI/GTC ကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ (စင်္ကာပူ)ရဲ့ လပတ်ညှိုနှိုင်းအစည်းအဝေး ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၁ ရက်နေ့ တွင် စင်္ကာပူ၊ Clemeti ရှိ မအေးနန္ဒာဝင်းမောင်၏ နေအိမ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားဟောင်းများ ဖြစ်ကြသော ကိုဝင်းကျော်မိုး(93 EP)၊ ကိုအေးမင်းစိုး(92 MP)၊ ကိုသောင်းဆွေဝင်း(95 MP)၊ ကိုစောအောင်ထွန်းဦး(97 MT)၊ ကိုကျော်လွင်ဝင်း(96 MP)၊ ကိုသန်းကျော်ဦး(97 Civil)၊ ကိုအောင်ခိုင်လင်း(98 MP)၊ ကိုမင်းသူ(99 EP)၊ ကိုနိုင်ဝင်း(EC 99)၊ မဝေဝေနွယ်(97 MT)၊ မစုမာဝင်း(97 Civil)၊ မအေးနန္ဒာဝင်းမောင်(98 Civil)၊ မရည်မွန်သောင်း(98 Civil)၊ မအိအိခိုင်((98 EP)၊ မကြေးမုံဝင်း(99 EP) စသူတို့၁၅ ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
သက်ဆိုင်ရာမေဂျာကိုယ်စားလှယ်များမှ ကောက်ခံရရှိသော အလှုငွေများကို ဘဏ္ဍာထိန်း မဝေဝေနွယ်ထံသို့ ပေးအပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ မဝေဝေနွယ်မှ Update ငွေစာရင်းကို သူငယ်ချင်းများအားလုံးထံသို့Email မှတဆင့် ပေးပို့ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Email လက်ခံရရှိချိန်တွင် ငွေစာရင်းကို အချိန်ပေးကြည့်ရှုပေးဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
ယခုလအတွက် ရွေးချယ်ခဲ့သော ဆရာ၊ဆရာမ စာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ဒေါ်မီမီမျိုးသူ (Academic)
၂။ ဒေါ်အေးအေးမြင့် (Civil)
၃။ ဦးကျော်ဝေ (EP)
၄။ ဦးမောင်မောင်လူသန့် (EC)
၅။ ဦးသန်းနိုင် (MP)
၆။ ဦးထင်အောင် (MT)
ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် ဆရာ၊ဆရာမလူဦးရေ ထပ်မံတိုးခြင်း
ကျောင်းအုပ်ကြီး(၃)ဦးနှင့် ဆရာ၊ဆရာမ(၅)ဦးကို ကန်တော့ခံ စာရင်းတွင် ထပ်မံထည့်သွင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ရဲ့ယခင်အတည်ပြုထားသော မူအရ ၁၉၉၅ မှ ၂၀၀၄ ခုနှစ် အတွင်း ကျောင်းတွင်သုံးနှစ်ဆက်တိုက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်ရမည်ဆိုသော နေရာတွင် ၁၉၉၅ မတိုင်ခင်နှစ်များမှ ဆရာ၊ဆရာမများအား တိုးချဲ့ ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။
Mon GTI/GTC ကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်းများ ဒုတိယအကြိမ်ကထိန်သင်္ကန်း ကပ်လှုရန်ဆွေးနွေးခြင်း
ဒုတိယအကြိမ် ကထိန်သင်္ကန်းအလှုကို ၁၇-၁၀-၂၀၀၉ စနေနေ့ တွင် တိုးပါးရိုးမြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ဖို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ် ဖြစခဲ့ပါတယ်။ အလှုငွေများထည့်ဝင်လှုဒါန်းလိုသူများ နီးစပ်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များထံသို့ကုသိုလ်ယူ လှုဒါန်းပါဝင်နိုင်ကြပါတယ်။
အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာပြီး ဝိုင်းဝန်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြသော သူငယ်ချင်း၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံးကို အထူး ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။ မိမိတို့ နှင့် နီးစပ်သော ၁၉၉၅ ခုနှစ်မတိုင်ခင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားခဲ့ကြသော ဆရာ၊ဆရာမများကို နာမည်၊ နေရပ်လိပ်စာများ သိရှိပါက စာရင်းပေးသွင်းကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ကထိန်အလှုနေ့ ကိုလည်းလာရောက်ပြီးကုသိုလ်ယူဖို့ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဖိတ်ခေါ် လိုက်ပါရစေ ရှင်။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 05:02 No comments:
ည၊ အိပ်မက်ဆိုးနှင့် စကားလုံးမရှိတဲ့ကျွန်တော်
အဲဒီညမှာမှ ကျွန်တော် အိမ်မက်ဆိုးတစ်ခု မက်ခဲ့တယ်။ အစိမ်းရောင် ငှက်ဆိုးက ကျွန်တော့် ရင်ဝ တည့်တည့်ကို ပန်နတီဘောလုံး ကန်သလို စောင့်ကန်ထည့်လိုက်တယ်။ ကောင်းလိုက်တဲ့ကန်ချက် ဂိုးတိုင်နှစ်တိုင်ကြားထဲ တန်းကနဲပဲ။ ဘယ်ကနေဘယ်လို ဖမ်းရမယ်တောင် မသိလိုက်ဘူး။ အဲဒီဂိုးဝင်ပြီးတဲ့နေ့ ကစပြီး အမှောင်ကျသွားလိုက်တာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် မနည်းကုန်းရုန်း ပြန်ရှာလိုက်ရတယ်။ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တိုင်း အစိမ်းရောင်ငှက်ဆိုးက ဓါးကြီးမိုးပြီး မာန်ဖီနေလိုက်တာ။ မနေနိုင်လို့ကျွန်တော်တောင် လှမ်းဆဲလိုက်သေးတယ်။ သေချင်းဆိုး ငှက်ဆိုးလို့ ။
မဆီမဆိုင်ဗျာ။ သူတို့ ဟာသူတို့ဘာသာရေးစစ်ပွဲ ဆင်နွှဲတာ ကျွန်တော့်တို့ ကိုလာ ထိတယ်။ ကိုယ့်ဟာကို သီးသန့်နေနေတဲ့ဟာ။ အင်းပေါ့လေ။ ကမ္ဘာ့ ရွာကြီးထဲမှာမှ ကိုယ်က လှိုင်းသွားစီးမိ လိုက်တာကိုး။ လှိုင်းတွေကြားထဲမှာ အကိုင်အတွက်မတတ်တော့ စုန်းလုံးကို မြုပ်ရော။ မှီရာတော့ ကုန်းကောက်လိုက်သေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံး သုံးလို့ ကို မရတော့ဘူး။
ဒီလိုနဲ့" ငါ့ ဒိန်ခဲတွေ ဘယ်သူနေရာရွှေ့ လိုက်သလဲ" လို့အားရပါးရ လှမ်းအော်လိုက်မိတယ်။
ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောစရာစကားလုံးတောင်ရှာမရဘူး။ ဒီလို ခံစားမှုမျိုး ရည်းစားနဲ့ ကွဲပြီး အသည်းကွဲခဲ့ဖူးတွေ နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားတို့ချစ်တဲ့ ရည်းစားပတ်သက်တာတွေ တစ်ခုမှ ပြန်မနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုခံစားရမလည်း။ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ်ဖန်တီး ထားတာတွေ တစ်ခုမှပြန်မရတော့ဘူးလို့ ဆိုတဲ့အချိန်မှာ ကမ္ဘာပျက်လုမတတ် ခံစားရတယ်။ တကယ်ပါ ဖွင့်ဆိုရှင်းပြဖို့စကားလုံးမရှိဘူး။
သည်နေ့ မနက်တော့ အိပ်မက်ကလန့် နိုးလာလေရဲ့ ။ ဒါပေမယ့် ဒဏ်ရာကျက်ဖို့ တော့ လိုနေသေးတယ်။ အချိန်ဆိုတာ အကောင်းဆုံး သမားတော်လို့ ဆိုစမှတ်တော့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချစ်သူ၊ ခင်သူ၊ သူငယ်ချင်းအားလုံးရဲ့နားလည်စွာဖြေသိမ့်ပေးနိုင်မှုတို့ ကို ရိုးရိုးသားသား ငတ်မွတ်နေမိပါတယ်ဗျာ။
(အထက်ပါစာကို ကျွန်တော်စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ရေးပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ ကစပြီး ဆိုဒ်ကို ၇၈၆ ဟက်ကာတွေ တိုက်လို့hosting server က ဒေတာတွေ သုံးစားမရတော့လို့ ပါ။ ကျွန်တော်နဲ့ ကိုကျော် တို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အကောင်းဆုံး အဖြေက အသစ်လုပ်ပါဆိုတော့ ယခုလို မြင်နေရတာပါ။ အားလုံး နားလည် စာနာပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျန်နေသေးတဲ့အပိုင်းတွေကို အမြန်ဆုံး ပြီးအောင် ကြိုးစားသွားမှာပါ။ အခုတော့...)
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 07:21 1 comment:
သင်္ကြန် အတွက်ကောက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ အလှူငွေစာရင်း
၂၀၀၉ သင်္ကြန် နဲ့ ပက်သက်ပြီး အသိပေးတင်ပြ ရမယ့် စာရင်းဇယားတွေ အကြောင်းအရာတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ ကျွန်တော့် ဖက်က မအားလပ်မှု့တွေကြောင့် နောက်ကျ အသိပေးဖြစ်တာကိုတော့ အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 18:17 No comments:
Books Hive E-books Sharing Site
ဟိုတလောက ကိုမြိတ်ပေးတဲ့ လင့်ကနေဆိုဒ်တစ်ခုကို စမ်းဝင်ကြည့်မိတယ်။ Ebooks Sharing Site ပါ။ သာမန်အားဖြင့် ကျွန်တော် စာအုပ်ရှာချင်ရင် PDF search engine ဒါမှမဟုတ် Scribd ဒါမှမဟုတ် Forum ထဲ ဝင်ရှာဖြစ်ပါတယ်။ English Version တွေတော့ အတော်အတန်အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာစာအုပ်စာပေတွေတော့ Blog တွေရဲ့ အညွှန်းတွေကိုပဲ အားကိုးနေရတယ်။
အခုဆိုဒ်ကတော့ ကျွန်တော်ပြောနိုင်တဲ့ ကောင်းတယ်ဆိုတာထက် ပိုကောင်းတာတွေ့ ရတယ်။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 18:44 No comments:
Mon GTI/GTC/GTU ဆုံဆည်းရာနှင့်ပတ်သတ်၍
Mon GTI/GTC/GTU ဆုံဆည်းရာ နှင့်ပတ်သတ်၍ ကျွန်တော်ပြောစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။
ယခုအချိန်ထိ ကျွန်တော်တို့ ဆီကို member registration လုပ်တာ 142 ဦးရှိပါပြီ။ စိတ်ပါဝင်စားကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ထပ်မံလည်း ခေါ်ဖိတ်အပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတလော ကျွန်တော့စိတ်ထဲမှာ သံသယဖြစ်နေတာ တစ်ခုက တစ်ချို့ မင်ဘာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကမဟုတ်ဘူးလို့ခံစားမိတယ်။
အစကတော့ အားလုံးအဆင်ပြေအောင် စည်းကမ်းချက်တွေ မလုပ်တော့ဘူးလို့စဉ်းစားထားပေမယ့် နောက်ပိုင်းမလိုအပ်သော ပြဿာနာတွေ မဖြစ်လာအောင် တစ်နည်းနည်းနဲ့ လုပ်ကြည့်ဖို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းက ကျောင်းသားဟောင်း၊ ကျောင်းသားအသစ်များမှလွဲရင် တခြားသူတွေကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပါမယ်။ ထို့ ကြောင့် အချက်အလက်တစ်ချို့ ကို ကျွန်တော့ဆီ (သို့ ) မိမိ ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာများတွင် ရေးသားတင်ပြပေးကြပါလို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
၁။ နာမည်ကို မူရင်း(သို့ ) တစ်ခြားပေးနိုင်ပါတယ်။ မူရင်းဖြစ်ရင်ပိုကောင်းပေမယ့် သင့်တော်သော Nick name များကိုလည် အဆင်ပြေသလို ပေးနိုင်ပါတယ်။ (သူငယ်ချင်းများမှတ်မိရန် ရည်ရွယ်၍)
၂။ မိမိရဲ့ မေဂျာ၊ ကျောင်းပြီးတဲ့ခုနှစ်(သို့ ) လက်ရှိကျောင်းတက်နေဆဲ စသည်ဖြင့် ဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။
၃။ မွေးနေ့ သက္ကရာဇ်များကိုတော့ Register လုပ်ရင် အမှန်ဖြည့်ပေးပါ။ အသက်မဖော်ပြချင်ရင်လည်းရပါတယ်။ Show my birthday ကိုတော့ Click လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်။ ဒါမှ သူငယ်ချင်းတွေ မွေးနေ့ ဆုတောင်းပေးပို့ နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၄။ ဓါတ်ပုံများကိုတော့ profile တွင် မိမိပုံတင်စေလိုပါတယ်။ Photo Album ထဲမှာတော့ မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သော၊ ကျောင်းသားဘဝ၊ လက်ရှိဘဝ၊ (သို့ ) မိမိဒေသ၊ ကျောင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ပုံများကိုသာ တင်စေလိုပါတယ်။ မလိုအပ်၊မသင့်တော်သော ပုံများကို ပယ်ဖျက်ရပါလိမ့်မယ်။
၅။ ယနေ့ မှစ၍ ကျွန်တော်သံသယဖြစ်သော Member များကို Pravite Message ပေးပို့ ၍ အသိပေးအကြောင်းကြားသွားပါမည်။ တစ်လအတွင်း ကျွန်တော်ထံသို့နာမည်ရင်း၊ မေဂျာ၊ ကျောင်းတက်ခုနှစ်များကို ပြန်လည် မဖြေကြားပေးနိုင်သော Member များအား စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ရပါလိမ့်မည်။
နှစ်သစ်မှာ သူငယ်ချင်းများအားလုံး ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
မိမိတို့ ၏ စိတ်ကူး၊ အကြံဥာဏ်များလည်း ဆွေးနွေးပြောဆိုနိုင်ကြပါစေ ခင်ဗျာ။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 09:273comments:
ကျွန်မရောက်စတုန်းက မှတ်မှတ်ရရ အခြေခံအထက်တန်း
တွေအားလုံးကို မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီးခံစားလိုက်တာနဲ့ လတ်ဆတ်နေခဲ့တာပါ......
အခုလည်းကျွန်မ ပိတောက်ပင်က ရွှေဝါရောင်ပန်းရနံ့တွေကို ရှူရှိုက်မော်ကြည့်ရင်း၊ အဝေးက
သင်္ကြန်သီချင်းသံသဲ့သဲ့နဲ့ ရေပက်ခံကားတွေရဲ့ အပျော်သံစဉ်တွေကိုနားစိုက်ထောင်ရင်း မောင့်
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 00:37 No comments:
ကင်မရာမင်း(ကိုကျော်လွင်ဝင်း)ဆီက ဓါတ်ပုံတွေ ရရခြင်း ရွေးပြီး တင်လိုက်ပါတယ်။ အားလုံးလိုလို ပါမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်စကားကိုတော့ နောက်မှ ကိုသောင်းဆွေဝင်း(သို့ ) မနန္ဒာကနေ ပြောပါလိမ့်မယ်။ ငွေစရင်းချုပ်ပြီးသွားရင်ပေါ့။
ကျွန်တော့အနေနဲ့ တော့ မြင်တာတွေ့ တာ ခံစားရတာ နည်းနည်းလောက်တော့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေ ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်တို့တကယ်ပျော်နေကြတာ တွေ့ရတယ်။ တစ်ချို့ တွေ အရမ်းပင်ပန်းနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်ပျော်နေကြတယ်။
စင်္ကာပူ life stlye က တကယ့်ကို stress ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေ၊ လူမှုရေးတွေ အရမ်းကို ရှားပါးနေကြပါတယ်။ ဒီလိုကြားထဲမှာမှ ဒီလိုအစီအစဉ်လေး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြတာတွေဟာ တော်တန်ရုံစိတ်တူညီမှုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ပိုပြီး harmony ဖြစ်လာတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ ဒါလေးပါပဲ။
ဓါတ်ပုံလေးတွေ ခံစားကြည့်ကြပါ။ မူရင်း Album ကို ဒီနေရာမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 05:53 No comments:
ယခု March လအတွက်ကောက်ခံ ရရှိ ပြီးသော ငွေနှင့်စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။
အချို့သော သူငယ်ချင်းများ အဆင်မပြေ ၊ အချို့သော သူငယ်ချင်းများ အဆက်သွယ်ပြတ်၊
အချို့သော သူငယ်ချင်းများရန်ကုန်ပြန်၊ အချို့သော သူငယ်ချင်းများ မအားလပ်
အချို့သော သူငယ်ချင်းများ -------------------
ဒီလိုနဲ့ အင်အား အနည်းငယ်ကျဆင်းလျှက်ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း မိသားစုကိစ္စနဲ့ ပျာယာခတ်နေရင်း တာဝန်တွေလစ်ဟင်းခဲ့ပါတယ်။
( ကိုစောအောင်ထွန်းဦ၊ မအေးနန္ဒာဝင်းမောင်၊ကိုမင်းသူ၊မဇာဇာထွန်း၊ မကြေးမုံဝင်း၊ မနွယ်ဇင်နှင်း၊ ကိုကျော်လွင်ဝင်း၊ မအိအိခိုင်၊ မဝေေ၀နွယ်၊ကိုအောင်ခိုင်လင်း၊ ကိုဝင်းသန့်၊ ကိုသန်းကျော်ဦး၊
မခင်ထိပ်တင်၊ ကိုစောမောင်မောင်ချို .........တို့ကတော့ Singapore မှာ အချိန်တွေ အရမ်းရှားပါးတဲ့ ကြားထဲက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေ နည်းပါးစွာဖြင့် တော်တော့်ကိုပဲ လုပ်နိုင်-ကိုင်နိုင်- ကြိုးစားနိုင်ကြပါတယ် )
ရှိထားပြီးသော email address များအပြင်နောက်ထပ် ထပ်မံဖြည့်သွင်းထားသောသူငယ်ချင်းများ
ဆရာ/ဆရာမများ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးများ ထံသို့ လည်း နီးစပ်ရာ forward ဆက်လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ တစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ ။ လုပ်နိုင်သမျှလေးလုပ်ရင်းနဲ့ ဆရာ ဆရာမ ဆရာကြီးများအားလုံး ( ၆၇ ဦး = ငွေကျပ် ၆၇ သိန်း ၀န်းကျင် ) ကို ပေးပို့ကျေးဇူးဆပ်ပြီးပါပြီ။
(အချို့သော ဆရာ ဆရာမ များ ဆက်သွယ်မရ သေး`၍ ကျန်နေသေးပါတယ်)
အလှူငွေ Balance Sheet( before March 15 ,2009 ) လည်းအောက်မှာ Attached လုပ်ထားပါတယ်။
ဆရာ ဆရာမ များကို အမှူးထားပြီး-ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က လည်းကထိန်ပွဲကျင်းပ လှူဒါန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ယခု လာမည့် Sunday တွင် Singapore Toa Payoh ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း မှာပြုလုပ်မည့် သင်္ကြန်ပွဲ တွင်လည်း ကော်ပြန့်စိမ်း ကျွေးမွေးလှူဒါန်း ရန်ရှိပါတယ်။အားလုံးကို ဒီနေရာကပဲ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
အခြားသူတွေကိုလည်း တိုက်တွန်းရင်း ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လည်း မာန်တင်းရင်း
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 06:47 No comments:
A guide for foreign workers (4)
အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
အိမ်မှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ရန် လာရောက်အလုပ်လုပ်ကြသည့် နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများ(Foreign Domestic Workers-FDW)သည် နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေအပါအဝင် ပြဌာန်းထားသည့် အခြားသောဥပဒေများအရ လိုအပ်သော အကာအကွယ်ပေးမှုများ ခံစားခွင့်ရရှိရပါမည်။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 07:34 No comments:
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 07:07 No comments:
A guide for foreing worker(3)
အလုပ်သမားတစ်ဦးအနေဖြင့် သင်ရရှိမည့် အခွင့်အရေးများနှင့် သင်၏တာဝန်ဝတ္တရားများအား သိရှိထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အောက်ပါ ကဏ္ဍများပါဝင်သော အလုပ်ကန်ထရိုက်တစ်စောင်ကို သင်နှင့် သင်၏ အလုပ်ရှင်တို့အကြား ချုပ်ဆိုထားသင့်ပါသည်။
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 07:49 No comments:
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 00:572comments:
အမှတ်တရ မတ် ၂၂
(အမှန်တော့ ဒီပို့ စ်လေးကို မနန္ဒာက မတ်လ(၂၂)ရက်နေ့ ကိုသောင်းဆွေဝင်းမွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်ရေးခဲ့တာပါ။ ဒီဖက်ဆိုဒ်မှာလည်း ရှိသင့်တယ်ထင်လို့တင်လိုက်ပါတယ်။)
၂၀၀၆ ခုနှစ် တိုပါးယိုးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကျင်းပတဲ့ မြန်မာနှစ်သစ်ကူး သင်္ကြန်။
စင်ကာပူရောက်ခါစ မို့ အရမ်းအံ့သြပြီးအရမ်းကို ပျော်ခဲ့ရတဲ့ သင်္ကြန်ပါ။ ရေခြားမြေခြားပေမယ့် အမူအကျင့်နဲ့ သဒ္ဒါတရားမခြားနိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ချစ်စရာ စိတ်ဓာတ်အတွက် အရမ်းကိုဂုဏ်ယူခဲ့မိတယ်။ ရေစိုစိုနဲ့ စတုဒီသာကျွေးတဲ့ ရိုးရာမုန့်တွေကို စိတ်တိုင်းကျ အားရပါးရ စားနေတုန်း 'ဟဲ့ကောင်မလေး ငါ့ကို မှတ်မိလား ' ဆိုတဲ့အသံကြောင့် လှမ်းကြည့်မိလိုက်တော့....။ အင်း မှတ်မိတာပေါ့ ဘယ်လိုမေ့မှာလဲ ကျောင်းတုန်းက နာမည်ကျော် ဂျင်းဘောင်းဘီပဲအမြဲဝတ်ပြီး လမ်းသလားနေကျ လူကြီးလေ။ ကျောင်းတုန်းကဆို စကားတောင်တစ်ခွန်းမှ ပြောဖူးတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အမိကျောင်းတော်ကြီးကမွေးပြီး ဒီလိုနေရာမှာ ပြန်လာတွေ့ခွင့်ရတော့ ဘာပဲပြောပြော ၀မ်းသာမိခဲ့တယ်။ ဖုန်းနံပါတ်တွေဘာတွေ ပေးပြီး အဲဒီလူကြီးက ငါတို့ကျောင်းက နောက်ထပ်ကောင်မလေးတစ်ယောက်လည်း ငါတွေ့လိုက်တယ်တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ် နန္ဒာလည်း တွေ့ပြီးပါပြီ။ B Tech မှာ အတန်းတူခဲ့တဲ့ သင်းယုဆွေ ပါ။ အဲဒါနဲ့ပဲ ဘာမှဆက်မပြောဖြစ်ကြပဲ အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားလိုက်တာ မရွှေဇာ ကျောင်းတက်ခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလှမ်းအကြောင်းကြားမှပဲ ပြန်ပြီး အဆက်အသွယ်လုပ်ဖြစ်ကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ ဒီလိုပဲ တခါတလေ ဖုန်းပြောဖြစ်ကြပေမယ့် မထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါ။ နောက်ထပ်အရှုပ်ထုပ်လေး ဇော်ရှင်း ကျောင်းတက်ခွင့်ရတော့ ပိုပြီး ဆုံဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ နောက်ထပ်ပိုပြီး သိခွင့်ရခဲ့တဲ့ အဲဒီလူကြီးရဲ့ အကြောင်းကတော့ မော်လမြိုင် GTI ကနေ ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး စင်ကာပူမှာ ကျောင်းဆက်တက်နေခဲ့တဲ့ ကျောင်းဆက်တက်ခွင့်ရအောင်ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ ကျွန်မတို့ အတွက် သူက အရမ်းကိုဂုဏ်ယူနေခဲ့တာတဲ့လေ။
(ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် more ကိုနှိပ်ပါ။)
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 07:062comments:
မွန်ပြည်နယ်၊မော်လမြိုင်မြို့ နယ်၊ ရိုးဂိုးရွာရှိ ကျိုက်ရိုးဂိုးစေတီတော်မြတ် ရောင်ခြည်တော်ကွန့် မြူးခြင်း(၂၀၀၈ခုနှစ်)
Posted by Mon GTI/ GTC/ GTU at 06:49 No comments: